Usoro ndoputa Boochisema - nyocha Aga m ekwu ụzọ m ga-esi... | Интересный контент в группе Туры, отдых, курорты, отели
News FeedTopics 874Photos 7Videos 1Participants 2 222
2 222 participants in the group
Usoro ndoputa Boochisema - nyocha Aga m ekwu ụzọ m ga-esi chekwaa mgbe m na-akwagide akwụkwọ. Ndewo ndị njem niile na ndị ọzọ! Aha m bụ Katya na di m bụ Gini. O nwere ego ruru 15% na ntinye akwụkwọ ntanetị. Ọ rụrụ ọrụ na ntinye akwụkwọ ma ugbu a imirikiti ụlọ maka ya dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ. Taa m ga-agwa gị maka ịme akwụkwọ n ’ebe ntinye akwụkwọ. Banyere otu anyi si edere onwe anyi ulo. Nke mbu, tupu iwere akwụkwọ, ikwesiri ịdebanye aha, tinye akwụkwọ ozi na-arụ ọrụ na ntinye akwụkwọ (ọ dị mkpa na ịnwere, mfe ịnweta ya) ma mepụta paswọọdụ. Ọ bụrụ ngbaghara paswọọdụ gị, enwere ike weghachi ya ngwa ngwa. Mana m na-adụ gị ọdụ ka ị nya ụgbọala na paswọọdụ ị ga-echeta. Na mberede, ịchọrọ ịnweta akaụntụ gị ọsọ ọsọ (n'ọdụ ụgbọ elu, n'ụlọ nkwari akụ). Ana m echefu paswọọdụ mgbe niile ma m kpebiri itinye ya na mpempe akwụkwọ. Iweghachite paswọọdụ dị oke mkpa, ọkachasị ma ọ bụrụ na Internetntanetị esighi ike. Enwere m akwụkwọ ntinye akwụkwọ na ekwentị m, nke na-emekwa ka ndụ m dị mfe na njem. Mgbe ịbanyechara saịtị ahụ n'ahịrị ọchụchọ, ịkwesịrị ịnya ụgbọ ala ebe njem gị dị n'ihu, ụbọchị, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ n'ime ụlọ ahụ, pịa bọtịnụ chọta. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ọ ga - ekwe omume ịhazi ihe nzacha maka nri ụtụtụ, ọdọ mmiri, belata ọnụ ụlọ ahụ (dịka ọmụmaatụ, gosi ego ruru 50 dollar kwa abalị), ọnụọgụ kpakpando, nyocha site na nyocha. Dabere na ahụmịhe m, m ga-ekwu na ọkwa ahụ dabere na nyocha kwesịrị ịdị elu karịa 7.0, ọ bụrụ na ọ dị ala, mgbe ahụ agaghị m amasị ya n'ezie. Ma, n’ezie, lelee nyocha ndị ahụ n’onwe ha, ihe ndị ọbịa dere na ọnụọgụ nke nyocha dabere na nnabata ahụ. E kwesịrị inwe ọtụtụ nyocha, ihe karịrị 50-100, na ọkwa bụ 7.0 ma dị elu. Mgbe ahọrọ nọmba ahụ, ị ​​ga-anyaba na nọmba kaadị akụ gị ma gosipụta nkọwapụta, dị ka aha, onye ị na-enye nọmba maka ya. Iji debe ọnụ ụlọ ime ụlọ, m na-adụ gị ọdụ ka ị jiri kaadị nwere oke ego nwere oke. Enwere kaadị akwụmụgwọ nke ị nwere ike itinye ego ole achọrọ maka ntinye akwụkwọ. Kwere m, ị ga-adị jụụ. Mgbe ị na-ahọrọ ime ụlọ, attentionaa ntị na ọnụnọ ụlọ mposi na mmiri dị n'ime ụlọ na mmiri ọkụ. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, ọ ka mma ịhọrọ nhọrọ ọzọ. Enwerela m oge ịsa ahụ ga-eme ka m kesaa ya na mpụga ime ụlọ ahụ, ọ bụ ezie na ọnụahịa ọnụ ụlọ ahụ mara mma. Enwere m mmasị ịnweta nri ụtụtụ n'ụlọ nkwari akụ. Lookingchọ kafe agụụ na-agụ n'ụtụtụ ka ị rie nri ụtụtụ yiri m obere atụmanya na-adịghị mma karịa ịnweta nri ụtụtụ n'ụlọ nkwari akụ. Ọzọkwa, maka ihe ụfọdụ, ọ dị oke ọnụ n'okporo ụzọ n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantsụ comparedụ ma e jiri ya tụnyere nri ụtụtụ a gụnyere ọnụahịa ụlọ ahụ. Detuo ime ụlọ dịka o kwere omume. N'idebata akwụkwọ, ole ka ole ị ga-enweta ga-aka. A na - ewepu ihe kachasị mma niile. Ọ bụrụ n lucky chi ọma ma gbaa akwụkwọ, ị ga-enweta nzipu nke nnweta akwụkwọ site na akwụkwọ ka akwadoro. M ukwuu ịkwado ibipụta ndoputa a, dika Ọtụtụ mgbe ọbụlagodi na ụlọ nkwari akụ kachasị mma ịchọrọ nọmba ndoputa na paspọtụ gị enweghị ike ịchọta ndoputa oge niile. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịhọrọ ime ụlọ nwere nkagbu na-enweghị ego, mgbe ahụ ị gaghị enwe nchegbu ma ọ bụrụ na atụmatụ ahụ agbanwe. Ọ dị mma ịtụle na mgbe ịbịarutere ọdụ ụgbọ elu, enwere ike ịgwa gị ka igosipụta ndoputa gị na họtel ahụ. Na ụgbọ elu ahụ, na -ejupụta kaadị ịkwaga, ịkwesịrị itinye aha ụlọ nkwari akụ ahụ na adreesị ya. Mgbe ị bịarutere na họtel ahụ, dabere na ụgwọ a kwụrụla ụgwọ ụlọ ahụ ma ọ bụ na akwụbeghị ya, a ga-edozi gị ozugbo ma ọ bụ mgbe akwụchara ụgwọ. N'ọnọdụ ndị a na-adịghị ahụkebe, ịkwụ ụgwọ na-apụta mgbe achụpụ ụlọ Dowe nzipu ozi niile, juo maka nnata. N'ọnọdụ nghọtahie, enwere ike ịdị mkpa. Ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ nwere ike idozi n'efu na mbụ karịa oge echere, dabere na ịdị adị. Na mgbakwunye na China, ha ga-ebikwa ebe ahụ, mana ha ga-achọ ịkwụ ụgwọ + abalị 1, kpachara anya. Ọzọkwa, mgbe ị na-achọ, chọọ ụlọ ahụ ka ọ dị ka ọ dị na foto mgbe ị na-achọ akwụkwọ. Mgbe ụfọdụ ndị na - ekpo ọkụ na - aga aghụghọ dị iche iche. Ha nwere ike inye ọnụ ọgụgụ dị ọnụ ala karịa na nke kachasị njọ ị kwụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ịnwere ike ịkpọtụrụ ndị ọkachamara mgbe niile site na ozi-e ma ọ bụ site na ekwentị. Enwela onwe gị ịdegara ha akwụkwọ. Na 90% nke ikpe, enwere ike idozi ọnọdụ esemokwu. Mgbe m na-eme njem n’Eshia, achọpụtara m na ọnụ ụlọ ụlọ maka itinye akwụkwọ dị ọnụ ala karịa ọnụ ahịa a gwara anyị na họtel ahụ mgbe anyị jụrụ. Kedu ihe kpatara nke a edoghị anya. Mana nke eziokwu na-adịgide. Ọ bụrụ n’ị bịa jụọ ụlọ maka ya, ọnụahịa maka ya ga - akpọ nke dị elu karịa na ntinye akwụkwọ. N'ọnọdụ ndị dị otú a, m na-adụ gị ọdụ ka ị jikọọ na WiFi ma debe ụlọ n'ime ụlọ "na-enweghị ịhapụ tebụl ego." Achọrọ m ka unu zuru ike zuru ike.